carbide လေ့ကျင့်ခန်း Bits
စိတ်ကြိုက် Mills Tools များ
End Mill Holders Market research now available at Brand Essence Research encompasses an exhaustive Study of this business space with regards to pivotal industry drivers, market share analysis, and the latest trends characterizing the End Mill Holders industry landscape. This report also covers de...ဆက်ဖတ်ရန် »
introduces the Fullcut Mill Contact Grip. With the addition of the Fullcut Radius Mill (FRM) and the Ball End Mill (BE), the Fullcut Mill Contact Grip series now features four connection sizes and seven cutter types. The contact grip isathreaded coupling system that achieves machining capacity ...ဆက်ဖတ်ရန် »
2017-Millcraft ဘေဂျင်းမှာရှိတဲ့ CIMT ပြပွဲဆီသို့ရောက် လာ. ,
အချိန် post: ဇန်နဝါရီ-05-2019
တရုတ်စက် Tool ကို & Tool ကိုထည်ဆောက် '' Association က 1989 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက် Tool ကိုပြရန် (CIMT), တိုင်းထူးဆန်း-ရေတွက်တစ်နှစ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အများဆုံးဂုဏ်သိက္ခာသည်နိုင်ငံတကာစက် tool ကိုပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးလေးပါးကိုနိုင်ငံတကာစက် tools တွေကိုပြပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ o ...ဆက်ဖတ်ရန် »
MillCraft လမ်းဖြစ်ပါတယ် 2018-အိန္ဒိယ AMTEX,
အာရှစက် Tool ကိုပြပွဲ (AMTEX), Pragati Maidan, နယူးဒေလီမှာ6-9 ဇူလိုင်လ, 2018 ကနေသူ့ရဲ့ 11 ကြိမ်မြောက်ထုတ်ဝေနိဂုံးချုပ်, အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့စက်ကိရိယာတခုစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားရန်၎င်း၏အစွမ်းကုန်အလှူငွေတို့အတွက်အသိအမှတ်ပြုသည်။ 19.534 စတုရန်းမိုင်အနှံ့ပြန့်နှံ့အဆိုပါနှစ်နှစ်တကြိမ်စက် tools များပြပွဲ။ မီတာ, အ tab ကိုမှယူဆောင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
နည်းပညာပိုင်းအကွံဉာဏျ & အလို့ငှာလက်ခံမှု
နေရပ်လိပ်စာ: No.68 လိကနျြးလမ်း, Xixiashu မြို့, နယူးခရိုင်, Changzhou, တရုတ်